Sida loo arko erayada heesaha ka dhawaaqaya iPhone iyo iPad | Wararka IPhone
Sida loo arko erayada heesaha ka dhawaaqaya iPhone iyo iPad
Wararka IPad | | Apple Watch
Mid ka mid ah astaamaha maqan ee Apple Music waa awooda lagu daawado ereyada heesaha la qaadayo. Apple (xilligan) ma bixiso suurtagalnimadaan, laakiin mahadsanid codsi bilaash ah oo aad kala soo bixi karto App Store iyo la jaan qaada iPhone iyo iPad waxaad ku samayn kartaa si fudud, xarunta ogaysiinta, oo kama hadlayno muusikada aaladda kale laga dhageysto, laakiin waxaan ka hadlaynaa isla muusigga oo laguu soo saaro adiga. Xitaa waad ku sameyn kartaa Apple Watch-kaaga. Waxaan kuu sharaxeynaa sida loo sameeyo talaabo talaabo.
Codsiga aan ka hadlayno waa MusixMatch, oo ah codsi aad ugu eg Shazam, oo laga yaabo inuu aad uga yaryahay kan, laakiin taasi waxay bixisaa fursado badan oo si buuxda ugu dhex milma Apple Music. Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad kala soo baxdo App Store, waxaan ku adkeysaneynaa, inuu yahay mid bilaash ah oo caalami ah, ansax ah iPhone iyo iPad, xitaa Apple Watch.
Markaad rakibto waxaad u adeegsan kartaa si toos ah si aad u aragto ereyada hees kasta oo Apple Music ah oo lagu ciyaaro aaladdaada, laakiin haddii aad rabto inaad hesho marin dhakhso badan oo toos ah, waxaa ugu wanaagsan inaad ku darto wixiisa xarunta ogeysiinta maxaa yeelay jidkaas waxaad ka heli kartaa shaqooyinkeeda xitaa iyadoo iPhone ama iPad xiran. Sidoo kale waad ka isticmaali kartaa Apple Watch, ikhtiyaarna u ah inaad ku darto "bidhaaminta" inaad gacanta ku haysato adigoo kaliya kor u xoqaya oo aad ku arkaysid xarfaha sidan oo kale si deg deg ah Apple smartwatch. Sida aad arki karto, dalabku wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad xakameyso dib u soo celinta muusikada iyo xitaa calaamadee sida ugu jecel qalbiga ka muuqda kontaroolada. Ma jirto wax cudurdaar ah oo aan la ogeyn waxa heesaha aad ugu jeceshahay ay ku dhahayaan Ingiriis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida loo arko erayada heesaha ka dhawaaqaya iPhone iyo iPad
Sideen u arki karin ereyada heesaha? Hadday suurta gal tahay. Marka horeba, waa in durba lagu daro heesta aan kaydinay. Ka dibna waa inaad gujisaa shaashadda oo way muuqataa. Waa sidaa oo kale.
Ku jawaab XR-Scully
Hagaag, haa, laakiin maahan ikhtiyaar in Apple ay ku darto asal ahaan, waa inaad adigu iyaga ku dartaa
Ma jiraa qof garanaya sida aan ku arki karo ereyada heesaha (horey loogu soo daray) macruufka 9?
'Haddii uusan ahayn iPhone, maahan iPhone', ololaha cusub ee Apple
Cydia Installer waxay hadda kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso xirmooyin duug ah